Kufsiga wadareedka gabdhaha yaryar loo geysanaayo oo kusoo badanayo Puntland | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Kufsiga wadareedka gabdhaha yaryar loo geysanaayo oo kusoo badanayo Puntland
Kufsiga wadareedka gabdhaha yaryar loo geysanaayo oo kusoo badanayo Puntland
Monday, May 08, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Deegcanada Puntland ayaa bilihii u danbeeyay falal laga argagaxo ay ka dhacayeen oo lagu faraxumeynayay gabdhaha yaryar ee da’doodu u dhaxeyso 13 ilaa 18 jirka iyadoo falkii ugu danbeeyay uu ka dhacay degmada Burtinle.
Afar nin oo dadka deegaanka ah ayaa gabar 13 jir ah ku kufssaday degmada Burtinle, 26-kii bishii April, falkaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid aargoosi ah oo fal hore u daba socday oo isla degmada Burtinle ka dhacay.
Wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland, Animo C/qaadir ayaa sheegtay in falkaasi uu ahaa mid aad looga argagaxo, iyadoo xaqiijisay in raggii geystay falkaasi ay baxsadeen.
Wasiirada ayaa sheegtay in flake gabadhaan yar ee 13 jirka lagu kufsaday inuu daba socday fal hore, valse si hoose loo xaliyay, waxayna tilmaamtay in sharciga la horkeeni doono kuwii geystay.
Dhamaadkii sanadkii hore ayaa shan wiiil dhalinyaro ah ay deegaanka Goldogob kufsi wadareed ugu geysteen gabar yar, taasoo sawirro iyo muuqaalo ka qaadeen xiligii ay kufsanayeen, jirkeedana dhaawacyo u geysteen, waxayna ku baahiyeen baraha bulshada, dhalinyaradaasi oo markii danbe bishii janaayo xukun lagu ridday.